Geo-Injiniya & TwinGeo Magazini - Yechipiri Edition - Geofumadas
Gumiguru, 2019 Geospatial - GIS, Engineering, My geofumadas
Isu tanga tichirarama inonakidza nguva yekushandurwa kwedhijitari. Muchirango chega chega, shanduko dzinoenda kupfuura kusiiwa kuri nyore kwepepa kune kurerutsa kwemaitiro mukutsvaga kugona uye mhedzisiro iri nani. Chikamu chekuvaka muenzaniso unonakidza uyo, unofambiswa nezvinoitika zvemberi zvinokurudzira senge Internet yezvinhu nemadhorobha edigital, yave padanho rekuzvidzoreredza pachedu sezvo nzira yeBIM yekukura ichibvumidza iyo.
Kumisikidzwa kweBIM kusvika padanho rechitatu kunowirirana nepfungwa yeDhijitari Mapatya, zvekuti hazvina kunetsa kumakambani akaita seMicrosoft kuwana chinzvimbo pamusika chaimboita kunge chemainjiniya nevakagadziri chete. Kwandiri, ini ndinobva kuchizvarwa chakaona CAD ichisvika senzira yekudhirowa yakajairika uye kuti zvainge zvakandiomera kutora 3D modelling nekuti pakutanga ruoko rwangu dhirowa dzaitaridzika kunge dzinokwezva pane kudhirowa kududzira. Uye kunyangwe isu tichitenda kuti izvo zvatinoita iye zvino neStructural Robot, AecoSIM kana Synchro ndiyo yakanyanya kunaka, tichitarisa kumashure makore makumi maviri nemashanu apfuura hapana zvayinoita kunze kwekundipa chivimbo chekuti isu tiri panguva imwechete yekutendeuka kune yakasangana mamiriro ekugadzirisa.
... munzira yeInjiniya.
Izvozvi ikozvino kuti iyo Gemini Nheyo dzinoita sedzikakweva imwe nzira kune iyo nzira yeBIM maturation mazinga, kudzoreredza pfungwa yekare inonzi Digital Twins pane iyo makambani makuru muindasitiri ari kuenda akananga kuchina chechina shanduko; uye nechinangwa chekuenderera mberi nhaurwa yekushanduka kweGeo-engineering, senge nyaya yekuvhara takasarudza iyo BIM mukuita kwayo kwayo uye kukosha kwayo.
Isu tinosimbisa iyo edition nemienzaniso yezvinhu zvitsva mune yakasarudzika yeGeo-engineering ne software uye nevapi vevashandi. Aya anotevera makesi uye zvinyorwa zvinomira pachena:
Intelligent zvivako manejimendi, Hong Kong sainzi paki kushandisa iyo Digital Twins pfungwa.
Autonomous kuongorora kwemigwagwa uye mutsara maratidziro vachishandisa Drone Harmony.
Christine Byrn anotiudza nezveDigitally Yepamusoro Guta zvine hukama neruzivo rwakavimbika nguva uye kupi pazvinenge zvichida.
LandViewer, nemabasa ayo ekuona shanduko kubva kubhurawuza.
Kana dziri dzekubvunzurudza, magazini iyi inosanganisira kudyidzana nevagadziri veSynchro, UAVOS uye yekutanga yaJosé Luis del Moral neProetheus chirongwa chake cheuchenjeri hwekugadzira chakashandiswa pamutemo wepamutemo.
... mune iyo nzira yeGEO.
Kune rimwe divi, kumuona achibuda muchirongwa chake chekuongorora, uye kufunga nezvekugadzirisa dambudziko rekubatanidza muyero weLADM neInfraXML zvinopfuura zvinogutsa. Standardization yakazopedzisira yapinda seyakajairika tambo pakati pekambani yakazvimiririra uye yakavhurwa sosi, vamwe sevatsigiri, vamwe sekusiya basa kuti zvinhu zvichaitika nazvo kana vasina ivo. Pakupedzisira kuwana ndiko kubudirira kwezviitiko; Naizvozvo, mune geospatial munda uye mukuenderera pamwe neCadastre mutsara, isu takasanganisira kesi yekubudirira mukutonga kwenyika.
Pamusoro pezvo, iyo magazini iyo yakafumiswa nemavhidhiyo akaomeswa uye inosangana inosangana, ine nhau kubva kuAirbus (COD3D), Esri mukubatana kwayo neSoftye, Hexagon (Luciad 2019 uye M.App) uye Trimble neCatalyst services.
Kuchengeta kuzvipira kwedu kukupa iwe nyaya dzinonakidza muGeo-engineering sipidhi, isu tinofara kuunza kwauri kechipiri kadhi yemagazini yeGeo-engineering yeSpanish neTwinGeo yekutaura Chirungu.
Verenga TwinGeo - muChirungu
Verenga Geo-engineering - MuSpanish
Previous Post«Previous Rimwe gore, chimwe chiitiko, chimwe chiitiko chinoshamisa… Iyo yaive YII2019 kwandiri!
Next Post 15th International gvSIG Musangano - zuva 1Next »